मलाई नेता–मन्त्री बन्नु छैन - सीताराम कट्टेल- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मलाई नेता–मन्त्री बन्नु छैन - सीताराम कट्टेल
वैशाख २८, २०७६ पर्वत पोर्तेल
रंगशाला बनाउने घोषणापछि कलाकार दम्पती सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) चर्चामा छन्  । यही महत्त्वाकांक्षी योजनामा जुटिरहेका सीतारामसँग झापामा गरिएको कुराकानीको अंश  ।
रंगशाला निर्माणको अभियान कहाँ पुग्यो ?
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण अभियानको काम सुरु भइसकेको छ । जनताको अगुवाइमा देशमै पहिलो खेलकुल रंगशाला बन्दै छ । यो कुनै एउटा खेलका लागि मात्र नभएर बहुउद्देश्यीय रंगशाला ।
एक जना व्यक्तिको जोडबलमा रंगशाला बन्न सक्ला त ?
एकै जनाले बनाएर पक्कै सम्भव हुँदैन । त्यही भएर त हामीले ७७ वटै जिल्लाका नागरिकलाई गुहारेका हौं । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई आह्वान गरेका छौं । सरकारलाई पनि घच्घचाइरहेका छौं । विकासका लागि जो पनि जिम्मेवार नागरिकले नेतृत्व लिन सक्छ भन्ने कुरामा भने हामी ढुक्क छौं । हामीले पनि त्यही कारण आँट गर्न खोजेका हौ । यो अघिल्ला परियोजनाको ऊर्जा हो । हाम्रो आँटले सबभन्दा ठूलो दबाब सरकारलाई पर्नेछ । हामी अभियन्ता मात्रै हौं । अभियन्ताको हिसाबमा दबाब दिन, सहयोगी अभियन्ता बन्न र विकासका गतिविधि चाँडो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न यो अभियान थालेका हौं ।
परियोजनाप्रति सरकारको खास धारणा के छ ? सरकारले सहयोग गर्ला त ?
सरकारले करिब २१ बिघा जमिन उपलब्ध गराएको छ । यसका लागि बजेट नछुट्याए पनि सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । सरकारी सहयोगबिना यत्रो ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्न गाह्रो पर्नेछ । रंगशाला बनाउने दायित्व सरकारकै थियो । कति कुरेर बस्नु भनेर हामीले आँट गरेका हौं । सरकारले गर्ने काम जनताले गर्न लागेको हो । हरेक व्यक्ति सरकार हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो । विकास निर्माणका योजना अलपत्र छन् । यो सबै अवस्थालाई हेर्दा अब जनता तातिनुपर्छ है भनेर यो अभियान सुरु गरेका हौं ।
रंगशाला बनाउन सघाउने मात्र छन् कि बाधा गर्ने पनि छन् ?
बाधा पनि भइहाल्छन् नि । धुर्मुस–सुन्तली को हुन् ? हिजोका दिनमा तपाईंहरूले बनाएको कलाकार न हो । अरू त कोही पनि होइन । न आजका दिनसम्म कुनै पार्टीको झन्डा नै बोकेर हामी हिँडेका छौं न कुनै पनि दलप्रति आस्था नै छ । स्वतन्त्र नागरिक भएर विकास निर्माणमा सरकारलाई सघाइरहँदा पनि जनताको साथ किन नपाइएला र भन्ने हाम्रो सोचाइ हो । हामीलाई चाहिएको तीव्र विकास हो । सरकारले काम नगरिरहेको अवस्थामा एक व्यक्तिले अभियान सुरु गरेको छ । हामीलाई साँच्चै विकास चाएिको हो भने सबै नेपालीलाई यो अभियानको अभियन्ता बन्न आग्रह गर्छु न कि विरोधी । टीकाटिप्प्णीको साटो सहयोग गरौं ।
रंगशालाको कुल बजेटचाहिँ कति हो ?
अनुमानित ३ अर्बको योजना हो । डीपीआर बनेपछि डिटेल थाहा हुन्छ । नगद मात्रै होइन जिन्सी सहयोग पनि हामी लिन्छौं । जसरी बस्ती बन्यो त्यही मोडालिटीअनुसार रंगशाला बन्छ । जनताले बनाउने, जनताले चलाउने र जनताका छोराछोरी खेल्ने सामाजिक मोडालिटीअनुसार रंगशाला बन्दै छ । भोलि यो रंगशाला देश विकासको सिस्टम नै परिवर्तन गर्न कोसेढुंगा सावित हुनेछ । ढिलासुस्ती छैन, कमिसन छैन, भ्रष्टाचार छैन । कोही ठेकेदार छैन । हामी सबैको होस्टे र हैसेमा बन्ने हो ।
रकम जुट््दै छ त ?
जुट्दै छ । सुरुमा माहोल बन्नै समय लाग्छ नि । कतिपयको बुझाइ गलत पनि हुन सक्छ । धुर्मुसले व्यापारिक प्रयोजनका लागि पो काम गरेको हो कि ! भन्ने पनि लाग्न सक्छ । नेताको खल्तीमा कमिसन जाने पो हो कि ! भन्ने आशंका पनि उब्जिन सक्छ । तर, यी सबै बुझाइ गलत सावित गर्ने प्रण गर्छु म । जनताको छोरोले नेतृत्व गरेको छ, तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, रंगशाला बन्छ ।
तपाईंलाई स्टन्ट गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । राजनीतिमा आउने सोच छ कि ?
मेरो त्यस्तो कुनै योजना र स्वार्थ छैन । मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने कुनै सपना छैन । नेपालीको पीडामा केही मलम लगाउन सकिन्छ कि भन्ने मात्रै हो । जनताको सेवक भएर काम गर्ने इच्छा हो । जुन दिनबाट मैले समाज बुझें, त्यसपछि यो निर्णय गरें । पार्टीको भन्दा देशको झन्डा बोक्न गर्व गर्छु । भोलि पनि त्यही आस्था र विश्वासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । म आफ्नै पेसामै रमिरहन पनि सक्थेँ होला । तर, किन यता लागें ? त्यसको उत्तर जनतासँगै छ । देश विकासका लागि असल अभियन्ताको खाँचो थियो मुलुकलाई । त्यहीँ खाँचो पूरा गर्नु थियो मैले । दलको जग बसाल्न यो अभियानमा हिँडेको होइन । मानवीय धर्म निर्वाह गर्न हिँडेको हुँ । मलाई जेसुकै आरोप लागे पनि जनताको काम गर्न छाड्दिनँ ।
अब कलाकारिताचाहिँ छाडिएकै हो त ?
रेगुलर सोहरूमा हामी आउन नसकेको यथार्थ हो । तर, कलाकारितालाई चटक्कै बिर्सिएर यता लागेको होइन । कलाकारिता बिर्सिन सकिँदैन पनि । हाम्रो मुख्य पेसा नै त्यही हो । सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिइरहेका छौं ।
समाजसेवाबाट मात्रै कसरी गुजारा चल्छ?
चल्दैन । यो व्यापार हैन । कुनै स्वार्थ हुँदैन समाजसेवामा । ललितपुर कुसुन्तीमा हामी बस्छौं । ६ वटा व्यावसायिक संस्थाको ब्रान्ड एम्बासेडर छौं । त्यहीबाट वार्षिक रकम आउँछ । त्यही पैसाले घरपरिवार चलेकै छ । भाइ जिग्री पनि कलाकारै छ । उसको आयले पनि थोरबहुत सहयोग भइरहेको छ । खान–लाउन गाह्रो छैन ।
प्रकाशित : वैशाख २८, २०७६ १०:३०
'तँ बुढो के को हिरो ? भन्दा रिस उठ्छ'
भारतीय फुटबलको पुनरुत्थान
छुट्ला है !
बाघ किन बन्छ नरभक्षी ?